Hubin in aad si sharci ah u iibsan karaan iyo sida loo isticmaalo Kratom waxyaabaha caleen in Michican ama magaalada Detroit? Haatadan la joogo, kaliya labo ka mid ah 50 Laga xoreeyo. Maraykanka reebi isticmaalka Kratom, inkasta oo dalalka ka badan waa bilaabi karaan ka dib suud in sanadaha soo socda. Michigan ayaa had iyo jeer lagu yaqaan Weeraryahanka-fikirka iyo waxa ay waafaqsan fikirka in Kratom shaaha daawaynta dabiiciga ah weli sharci ah dadka deggan gobolka this. Ethnobotanical waxa uu leeyahay tiro badan oo dadka isticmaala ee gobolka iyo salkeeda joogto ah u koraya sida shakhsiyaad sahamin faa'iidooyinka Mitragyna Speciosa ee niyadda, heerka tamarta iyo walaaca ka hayn.
Status Legal Michigan ee Kratom
Michigan ayaa lagu yaqaanaa in ay taageerto kaliya oo ku saabsan arin kasta oo bulshada cusub oo loo yaqaano ee Mareykanka iyo sidoo kale inay xushmeeyaan xorriyadda shakhsi ahaaneed. Kratom ayaa ka faa'iideystey Muuqaalkani casri ah oo hadda waa sharci ee gobolka. Dad badan oo u dhalan Michigan mahad faa'iidooyinka aan geedaha this, laga bilaabo xanuunka, hagaajinaysa shaqada difaaca jirka, fiirsashada sii kordhaysa, stress ah kortag,, iyo kor u qaadidda nasashada. Xitaa kuwa weli si looga faa'iideysto faa'iidooyinka geedo yaryar oo weli taageeraan helitaanka geedo yaryar oo sida kale oo caafimaad ah.
Nidaamyada iyo Sharciyada
Waa layaabna ma leh sababta dalalka sida Michigan jeedaan isticmaalka Kratom. All inaad sameyso waxaa eegto diiwaanka track doogga ayaa la xaqiijiyay in ay gobolka hooyo. Wixii qarniyo, doogga ayaa loo isticmaala xal daaweyn caadi ah dad in koonfur bari Asia, iyo qarsoodigan la noqotay ku fiday wadamada kale ee adduunka oo dhan. Waxaan odhan karaa in malaayiin qof oo dunida dacaladeeda waxaa si daacad ah oo isticmaalaya Kratom dheefaha caafimaadka ee. Waxa ugu fiican oo ku saabsan arrintan waa mid ka mid no ayaan weli u sheegan waxyeelooyin ka isticmaalaya geedo yaryar this.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah tayadiisa hadda samaynta Kratom fiican inaad si sharci ah ku Michigan:
• Waa aan sun: Waxa ay u muuqataa aan si raaxo leh ka marag kacayaa nooca Kratom ee aan sun sababta oo ah waxaa weli waa in ay warbixin kasta diiwaan-celintan oo sun ah ama waxyeelo daran sida aan inta badan ka heli markii aan u isticmaalno dawooyinka nin-dhigay.
• Waa non-dhawakhiyaha: Botanical ayaa looguma aqoon inuu daciifin hawlaha jirka ah oo joogto ah marka loo isticmaalo qiyaasood oo ammaan ah gudahood.
• Waxay leedahay wax calaamado ah bixitaanka daran: Si ka duwan badan oo daroogada ah muqaadaraad iyo opiates, kratom ma laha wax calaamado u bixid la taaban karo iyo waxa aan la arkaa in ay wax lala qabsado
Gadashada Kratom budada ah ee Dukaamada Head
Michigan degan-gaar ahaan kuwa ku sugan Detroit-karo u helaan Kratom maraayo wax lagu yaqaan dukaamada qiiq ama iyada oo loo marayo tobacconists oo mararka qaarkood iska iibiso dhalatada kale oo dukaamada ay. Inkastoo dukaamada, kuwaas oo ka ciyaarayaan door muhiim ah oo ay dadka taageeraya isticmaala waxyaabaha duwan, ay weli ma yihiin meelaha ugu fiican si aad u hesho Kratom. Tani waa sababta oo ah dukaamada waxay leeyihiin alaabada kale in ay aad u danaynayaan, taas oo macnaheedu yahay inay u badan tahay qaadi doonaa waxyaabaha yar oo keliya qiimo qaali ah si ay u daboosho qiimayaasha kor socdka ah ay. Sidoo kale, marka dukaamada kaxayn ku tilmaamay versions oo la soo baakadeeyey ee Kratom, waa laga yaabaa in aan Kratom asal ka soo Asia. Sidaa darteed, haddii aad rabto dhir tayo sare leh, waxa fiican in ay ka il kale oo aan ahayn in aad dukaan madaxa maxalliga ah inkastoo dukaamada, kuwaas oo si sharci ah u siin karaan heli.
Haddii aad doonayso inaad kala duwan ugu wanaagsan ee Kratom asal ah, aad u baahan tahay si ay u iibsadaan ka iibiya internetka kuwaas oo uu leeyahay xidhiidhka saaxiibtinimo fiican la leeyahay beeraleyda iyo leedahay diiwaan raadraac wanaagsan ee bulshada. Mid ka mid ah goobta in uu leeyahay sumcad weyn oo uu leeyahay dib u eegista socda wanaagsan waa Arena Ethnobotanicals, Shirkadda dhirta bixinta badeecada Kratom toos ah laga soo dejiyo beeraha Southeast Asian. Sidaas, waxaad awoodi doonaan in ay tahay in la ogaado halka ay caleenta dhirta ka yimid si aad hubaal garan karin waxa dhaawac ah kratom waa iyo nooca saamaynta si ay u eegaan ka hagardaamada. Ma aha oo kaliya in aad qiimaynaya sheyga tayo sare, waxa kale oo aad qiimaynaya ka qiime jaban yihiin kuwa laga helay in dukaamada Michigan.